Ndingawana Kupi Left mukwende Locations In France? | Save A Train
musha > Travel Europe > Ndingawana Kupi Left mukwende Locations In France?
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 31/07/2020)
France musha zviuru zvinokwezva. Kubva iconic Eiffel Tower muna Paris kusvika pebbled mahombekombe ose Nice, nyika nezvinhu kusingaperi kuita. Asi chii kana uri kushanyira ari layover, kana iwe kare achiongorora kubva hotera wako uye chitima wako haasiyi kwemaawa? Pane kukweva mikwende yenyu yose mumaguta akasiyana, ukaona munhu kuruboshwe mukwende nzvimbo yakapoteredza France kusiya mikwende wako uye kunakirwa vadUr zuva mutoro-isina.
Sezvatakamboreva, nyika izere nzvimbo kusiya mikwende wako, kunyange yokuzvifungidzira kunze inova zvakanakisisa kwamuri kunoenderana ako ezvinhu.
uri kana kushanyira guta pamusoro layover, wawana zvakawanda zvokusarudza yokuchengetera mabhegi ako. Paris ane dzendege huru mbiri, Charles De Gaulle (CDG) uye Paris Orly (ORY), uye vose chipo mukwende okuchengetera mukati chinouraya. Most chikuru vendege dzinobhururuka kupinda Charles De Gaulle, kunyanya nokuti transatlantic ndege, apo yakaderera bhajeti vendege vanowanzotevedzera kubhururuka kupinda Paris Orly. Zvisinei airport yako, unogona kunhonga mabhegi ako pashure kutiza kwenyu uye kuakanda kure chakachengeteka asati vakananga muguta.
At Charles de Gaulle, unogona kuwana lockers pedyo chitima chezvitima, izvo zvinoita zvikuru. Storage inowanika kubva 06:00 kuti 21:30, saka kuva nechokwadi kuti kudzoka pamberi nzvimbo anovhara.
Paris Orly mamiriro ezvinhu akadaro, pamwe rworuboshwe mukwende mikana iripo pedyo chiteshi chechitima. Mitengo zvinosiyana zvichienderana zvinoverengeka pamusoro, kusanganisira zvidimbu vasara uye kukura, kunyange zvine musoro uchitikurudzira. Maawa vakafanana CDG, kubva 06:00 kuti 21:30, saka kana uri kuda kusiya mikwende kwako kurara nechokwadi wasvika nenguva.
Other dzendege mukati France anoshanda zvakafanana, pamwe mukwende mikana iripo panguva dzendege dzakawanda, kusanganisira Nice, Lyon, uye Marseille. Ongorora dzomunharaunda Airport yako okuchengetera kusarudza uye mitengo.
Kana uri pachinzvimbo transiting kuburikidza pachiteshi chezvitima, iwe dzinoturwa aine plethora zvaungasarudza. Within Paris, Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare of Lyon, Gare Montparnasse, uye Gare of Marne the Vallee Chessy kupa zvose akasiya mukwende mikana, nemakambani mazhinji siyana aikwikwidzana kupa minamato yavo.
Mitengo mabasa aya siyana, aine sandara-mwero vachibhadharisa pakuchinja yokutanga 24 maawa, uye vaifanira chekuchengeta nguva 72 maawa. Mitengo ndeinotevera: small locker €5.50; Svikiro yokuchinjira mbatya kuchikoro € 7.50; yokuchinjira mbatya kuchikoro guru € 9,50. mumwe okuwedzera 24 awa nguva iri € 5.
Maawa uye nzvimbo uyewo zvinosiyana zvichienderana yemapurisa:
Nokuti kusvika kubva East: Gare de l'Est danho -1 Hall Central opposite toilets from 06:00 kuti 23:45 mazuva ose
Nokuti kusvika kubva South: Gare of Lyon horo 3, anongoerekana nokuti Rue of Bercy 06:15 kuti 22:00 mazuva ose
Zvayaiva pamahombekombe kuruboshwe: Gare Montparnasse Level mumwe 07:00 kuti 23:00 mazuva ose
The pakukura Paris: Gare du Nord danho -1, pedyo Car Rentals, pamusoro tekisi mbudo kubva 06:15 kuti 23:15 mazuva ose
Vaya pemusoro unoti kuna Disneyland: Station Marne the Vallee Chessy: danho 1 - 07:00 kuti 23:00 mazuva ose
Mumazana napamwe, vazhinji chitima dzemapurisa kupa kuruboshwe mukwende uye nzira yakatinakira kuchengeta nhumbi dzako. Izvi zvinonyanya zvakanaka vafambi pamusoro Eurail rwendo, vari kusarudza kuti husiku hwemusi chitima Vatasvi pane mumahotera. Check vemo zvinyorwa kuti chitima wako chezvitima kuwana chii mukwende mikana vavanopisira. Sezvo nyika ndiyo yakanaka chingaitwa njanji pakufamba, nemazana nzira unobatanidza maguta ose makuru nemisha, you can find left luggage locations all over France.
Mitengo Kazhinji zvine musoro uye maawa kuti mukwende anogona anosiyana kubva 24 awa kuwana mangwanani there. Chitima dzemapurisa uyewo muvigire rakaisvonaka nezvechisarudzo vafambi, sokumbovhakacha Via chitima zvinoda kurambidzwa kure vashoma pane ndege. Unogona svika zvadzo maminitsi muchitima usati anoendazve (pachinzvimbo maawa, kufanana panhandare yendege), uye anobatirira mabhegi ako asati hopping pamusoro chitima yako, kubvumira kuti maximize nguva yako muguta.
Left mukwende Locations Around The City
Kana kare kushanyira guta kwemazuva mashomanana uye vari chete ikozvino vachiongorora kubuda, unogona kuva nemhanza. hôtels zhinji European kupa pachena mukwende okuchengetera kana uri mueni, uye iwe unogona kudzokera chero nguva dzosa mabhegi ako. Ndizvo zvazvakaitawo nemamwe homestay nzira, akadai Airbnb. Kumbira akukoka kana vachida kuchengeta mabhegi ako paunenge kuongorora guta.
zvimwe, maguta akawanda kupa rworuboshwe mukwende mikana kumativi mutaundi, kunyanya pedo guru wokukwezva vashanyi. Pane zvimwe yakazvimirira mabasa, asi makambani makuru akawanda anowanikwa muuzhinji France.
Stasher: Stasher ari mukwende basa unobatanidza vafambi pamwe zvitoro uye Hotels kupa okuchengetera mabasa. Inowanika dzakawanda zvikuru French maguta uye anobvumira paIndaneti Réservation, zvichiita nyore chaizvo. Website Its kuri dzichipfekeka chaizvo uye inoratidza nzvimbo maawa, mitengo, uye wongororo nzvimbo imwe neimwe kuitira kuti vafambi vanogona kuvimba mikwende yavo ichava kuchengetwa zvakanaka.
ः Olibg: Holibag nderimwe guru boka iripo zvose pamusoro France. Zvakafanana Stasher, nzvimbo chinobatanidza vatengi vane mabhizimisi dzakadai mumaresitorendi, Hotels, uye zvitoro kuti kupa mukwende okuchengetera. With mazana akasiyana nzira, uri anenge anosimbiswa kuwana nzvimbo kusiyira mabhegi ako, saka unogona kunakidzwa zuva rako.
Nannybag: Kana uri kugara Paris, bheji yako yakanaka ndiye Nannybag. Kudeuka okuchengetera basa muguta, Nanny bhegi inopa mumazana enzvimbo uye 24 awa kuwana vaya yokuwedzera mukupera nousiku. Mitengo vari sandarara € 6 paminiti hombodo rokutanga uye € 4 zvadaro. Chimwe chinhu chakanaka kwazvo chine Nannybag ndechokuti runovimbisa kuchengeteka wehomwe wako pachako inishuwarenzi wayo, izvo zvinoreva une zvachose norugare rwepfungwa.
Pane zvikonzero zvakawanda yaunoda kusiya bhegi rako zvakanaka zvakachengetwa, kana uri kushanyira rimwe guta riri zuva rwendo kana maximizing nguva yako pamberi neusiku chitima. Airports chinhu chakanakisisa chingaitwa layovers, apo chitima dzemapurisa kupa vamwe zvakanaka sarudzo kunhivi nyika. zvimwe, private mabasa unobatanidza vaiuya mabhizimisi kuti vachidonhedzera mabhegi ako rekurira uye nyore. Chero zvazvingava, kuva nechokwadi kuita homuweki yako iripo mikana, mitengo, uye okuchengetera maawa kuitira kuti unogona kuwana zvakanakisisa kuruboshwe mukwende nzvimbo muFrance kwamuri.
Found nyaya yedu “Ndingawana Kupi Left mukwende Locations In France?” kubatsira? Book pamwe Save A Train iwe French chitima matikiti uye kutanga rwendo rwenyu!
Unoda embed yedu Blog romukova “Ndingawana Kupi Left mukwende Locations In France?” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cafes-europe%2F ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
zvikwama chasara storebags masutukesi Train Travel travelfrance travelfree travelparis